फुच्चे तैमुरले बनाए आमा करीनाका लागि केक र आइसक्रिम ! – " सुलभ खबर "
फुच्चे तैमुरले बनाए आमा करीनाका लागि केक र आइसक्रिम !
एजेन्सी, २७ फागुन । बलिउड अभिनेता सैफ अलि खान र करीना कपूर खानका एक मात्र सुपुत्र तैमुरको तस्विर यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । तस्विरमा तैमुर आमा करिना र शेफसँग देखिएका छन् ।
रोचक कुकर त के छ भने तैमुरले आमा करीनाका लागि केक र आइसक्रिम बनाएका छन् । करीना छोरा तैमुरलाई लिएर शेफ विजय जौहानसँग वर्कशपका लागि पुगेकी थिइन् । जहाँ तैमुरले आमाका लागि केक र आइसक्रिम बनाएका हुन् ।
विजयले सामाजिक सञ्जालमा उक्त तस्वीर अपलोड गरेर खुशी साटेका छन् । उनले भनेका छन् तैमुरले आमा करीनाका लागि केक र आइसक्रिम बनाए । उक्त तस्विर शेयर गरेपछि तैमुरका फ्यानले तैमुर प्रति माया द,र्सा,उ,दै कमेन्ट गरेका छन् ।करीनाको कामको कुरा गर्नु पर्दा अ,क्ष,य कुमारका साथ फिल्म ‘गु,ड न्यू,ज’ मा देखिँएकी थिइन् । जुन फिल्मले बक्स अफिसमा कमाल गरेको थियो ।
यो पनि कोटेश्वर–जडीबुटी सडकको जाम कम गर्ने उपायका रुपमा हेरिएको हनुमन्ते करिडोर निर्माण अघि बढ्न सकेन
काठमाडौँ, २७ फागुन । कोटेश्वर–जडीबुटी सडकको जाम कम गर्ने उपायका रुपमा हेरिएको हनुमन्ते करिडोर निर्माण कौशलटारदेखि चार दोबाटोसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।खोलाकोअधिकार क्षेत्रमा घर र जग्गा हुँदा निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । बालकुमारीबाट मनोहरा हुँदै कौशलटारसम्मको सडक निर्माण अघि बढे पनि त्यसअघिको सडक निर्माण हुन नसकेको हो । यस सडकमा ३० मिटर क्षेत्रभित्रै घरलगायतका संरचना रहेका छन् । तिनलाई हटाएर आवश्यक स्थान खाली गराउनसके निर्माण सम्पन्न गराउन सकिने अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख लीलाप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
यो करिडोरको निर्माण मेलम्ची खानेपानी आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र सडक विभागले गरिरहेको छ । यी तीन निकायबीच पनि कहिलेकाहीँ समन्वयको अभाव देखिने गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारले जग्गा विकास योजना बनाउन थालेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “करिडोरको निर्माण शुरु हुनुभन्दा पहिले योजना बन्नुपर्ने भए पनि करिडोर निर्माण शुरु भएको लामो समय पछि मात्रै शुरु भएको छ ।”
वाग्मती र त्यसका सहायक नदीमा करिडोर निर्माण गर्न तीनै प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता विसं २०७५ मा भएको थियो । आगामी साढे दुई वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । सल्लाघारीबाट खोला किनारैकिनार बालकुमारीसम्म झण्डै नौ किमी सडक निर्माण हुँदा विशेष गरी भक्तपुरवासीलाई सहज हुने विश्वास गरिन्छ । सो सडकमा एकदेखि दुई मिटरसम्म पैदलयात्रु मार्ग र आठ मिटर चौडा कालोपत्र सडकको निर्माण हुनेछ । करिडोर निर्माणलाई सहायक सडकका रुपमा हेरिएकाले यसले मुख्य सडकको चाप कम गर्नेसँगै नदी सफा हुने, नदी क,टा,न र अतिक्रमण रोकिने, हरियाली क्षेत्र कायम हुने बताइएको छ । रासस